Nepali Jokes Archives - Page7of 8 - Khoyaa
Home / Jokes / Nepali Jokes (page 7)
के तिमि आफु लाई मुर्ख ठान्छौ?
पहिलो दिन एक शिक्षकले आफ्नो बिद्यार्थीहरुलाई भनेछन्। शिक्षक : तिमिहरुमध्ये को को आफुलाई मुर्ख सम्झन्छौ उठ । सबै बसिसहे तर राम उठे यो देखेर शिक्षकले रामलाई सोध्यो शिक्षक : के तिमि आफु लाई मुर्ख ठान्छौ? राम : होइन होइन सर,तपाई मात्र उठेको राम्रो लागेन त्यसैले उठेको।
मलाई अन्डरवयर देखाउनुस त
उहा घरमै हुनु हुन्छ
लोग्ने : (स्वास्नीलाई) सुन त यदि मेरो फोन आएको भए म छैन भनेर भनी दिनु है । स्वास्नी : (फोन उठाएर) उहा घरमै हुनु हुन्छ …. लोग्ने : (रिसाउदै) मैले पहिले नै भनेको हैन म छैन भनिदिनु भनेर … स्वास्नी : फोन तपाईंको हैन मेरो थियो
एदि बम पड्क्यो भने ?
दुइजना केटाहरु बाटामा जादै थिए , बाटामा तिनिहरुले ३ ओटा बम देखे । तिनीहरुले ति बम लाई पुलिशको जिम्मा लगाउने बिचार गरेर बोकेर हिडे , पहिलो : एदि कुनै बम बाटोमा पड्क्यो भने ??? दोश्रो : Tension नलेउ , पुलिश लाई भनी दिउला कि हामीले २ ओटा मात्र भेट्टाएका थियौ
बाघ बिडी पिउँदैथियो, एउटा मुसो आयो अनि भन्यो ‘बाघ दाइ छोड यो नशा, हिँड मसङ्ग , हेर जङ्गल कति राम्रो छ ! बाघ सँगै हिड्यो । केहि अगाडी हात्ती भेटियो, ऊ ड्रग्स लिदैथियो, मुसाले उस्लाई पनि त्यै डाइलग दियो, हात्ती पनि सँगै हिँड्यो । अलि अगाडि पुगेपछी सिंह व्हिस्की पिउदैथियो, …
एक दिन राजाराम (लादालाम) डाक्टरकोमा गएछ। लादालाम : डाक्टर साप, म अली मोतो भए जस्तो लाग्यो । मलाई दुब्लाउने उपाय बताइदिनुपल्र्यो! डाक्टर: तपाइले अब धेरै समय खेलमा बिताउनुपर्यो। हरेक दिन तपाँई १ घण्टा फुटबल, १ घण्टा क्रिकेट र १ घण्टा टेनिस खेल्नुपर्यो। लादालाम : त्यो त ठिक छ डाक्टर साप, …
मेरो स्वास्नीको फोटो
एउटा मानिस रेष्टुरामा बसेर पिउदै थियो। उ जति पिउदै जान्थ्यो उति नै पर्सबाट आफ्नो स्वास्नीको फोटो निकाल्दै हेर्थ्यो। एक पेग स्वाट्ट पार्थ्यो अनि फेरी पर्सबाट आफ्नो स्वास्नीको फोटो निकालेर हेर्थ्यो। त्यो अघी देखी हेरिरहेको मान्छेले अचम्ममा पर्दै सोध्यो:- किन तिमी एक पेग लिन्छौ, अनि फोटो हेर्छौ, अनि फेरी पिउन सुरु …
परिवार नियोजन भन्या के हो ?
आजभोलिका फटाहा बच्चाहरू नाति : हजुरबा ! यो परिवार नियोजन भन्या के हो ? हजुरबा(रिसाउँदै) : भाग उता ! मलाई थाहा छैन ! नाति : मलाई थाहा छ बुढा ! ! तिमीलाई थाहा भएको भए अहिले सम्पत्तिका १४ टुक्रा गर्नुपर्थ्यो र ?
बुढी होला भनेर डराएको
एउटा महीलाको भर्खर भर्खर बिहा भएको थियो। जहिले लोग्ने रक्सि खाएर ढिलो आउने गरेको देखेर उनी दिक्क भएकी थिइन। उसले एकदिन आफ्नो मिल्ने साथीसँग सल्लाह मागिन्,”हेर न म दिक्क भईसके मेरो श्रीमानसँग। जहिले ढिलो आउछ, अनी जहिले रक्सी पिएर आउछ। के गर्ने होला उपाए छैन?” साथीले सल्लाह दिइन्,”मेरो बुढाले पनि …
तिम्रो छोरी मलाई देउ
एउता हात्ती आफ्नो बीहेको कुरो गर्न कमिलाको घर मा गएछ हात्ती : मलाई तिम्रो छोरी अति मनपरी,तिम्रो छोरी मलाई देउ,हुन्छ? कमिला : म पहिले छोरीलाई सोद्चु, अनी भनौला!! एती भनेर हात्ती आफ्नो घर गएछ……… कमिला : तलाई केटो मनपर्यो त?? छोरी कमिला : अरु त सब ठिक छ , तर …
बिहान बिहानै रेडयो बोकेर
आइते बिहान बिहानै रेडियो बजाउदै जंगल तिर तोइलेट गर्न भनेर हिलेछ जब टोइलेट गरेर फर्कदै थियो धुर्मुसे ले सोधेछ – ओहो आइते म त मछु कि क्या हो, बिहान बिहानै रेडयो बोकेर हिनिस हँ आइते .. आइते – टोइलेट गाको नि .. धुर्मुसे – तेसो भए कस्तो भयो त टोइलेट …